ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ - Law Firms Dubai
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှတရားစွဲဆိုမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်အနုညာတစီရင်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအငြင်းပွားမှုများတွင်ရှယ်ယာရှင်များ၊ မိတ်ဖက်များ၊ ပိုင်ရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ LLC နှင့်မိတ်ဖက်များအကြားကော်ပိုရိတ်အငြင်းပွားမှုများ၊ ကန်ထရိုက်စာချုပ်များကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ချက်များချိုးဖောက်ခြင်း၊ မှားယွင်းစွာကိုယ်စားပြုခြင်း၊ ရှယ်ရီယာဥပဒေအကြံပေးများနှင့်နိုင်ငံတကာရှေ့နေများလိုအပ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားစီးပွားရေးအငြင်းပွားမှုများအမျိုးမျိုးရှိသည်။
သင့်လျော်သောတရား ၀ င်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်လည်ပတ်ပါသို့မဟုတ်သင်၏အမှုကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဤပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေတင်ပြပါ။
Amal Khamis ထောက်ခံသူများ & ဥပဒေရေးရာအတိုင်ပင်ခံ
Gulf Towers, Oud Metha၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, ယူအေအီး
သင်သည်ဘဝတွင်စိတ်သောကရောက်ရသောအခါတစ်ခါတစ်ရံသင့်ကိုကူညီရန်တစ်စုံတစ်ယောက်လိုအပ်သည်။ တခါတလေမှာ၊ ဘယ်နေရာမှာမှသင်စူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်ဝင်လာတယ်။
အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် ယခုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ်ရက်ချိန်းယူရန်တောင်းဆိုခြင်း -
မိုဘိုင်း: 971506531334 + or mobile: 971558018669 +
“ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ” ၂၉ စောင်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2014 မှာ 5: 53 ညနေ
လောလောဆယ်ငါတက္ကဆက်ပြည်နယ် USA တွင်နေထိုင်ကြသည်
ဧပြီလ 18, 2015 မှာ 9: 21 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2014 မှာ 6: 17 နံနက်
ဒါဆိုမင်းကိုဘယ်လိုကူညီမလဲ၊ မင်းပေးရမယ့်အခကြေးငွေကဘာလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ အဲဒါကိုအရေးတကြီးအဖြစ်ဆက်ဆံပါ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2014 မှာ 4: 19 နံနက်
ဇန်နဝါရီလ 3, 2015 မှာ 9: 16 နံနက်
ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၏စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်အဘူဒါဘီ၏ Glenelg ကျောင်းတွင်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်နေသည်။ ကျောင်း ၀ န်ထမ်းသည်နုတ်ထွက်သည်နှင့် (၃ လတစ်ကြိမ်အသိပေးချက်ကိုပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်) (ကျောင်းမှလက်စွဲစာအုပ်အရ) ကျွန်ုပ်သည်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဇန်နဝါရီလတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်လာမည့်ပညာသင်နှစ်အတွက်ပြန်ချင်၊ မလိုဖော်ပြသည့်ရည်ရွယ်ချက်ပုံစံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသည်။ သို့သော်တစ်နှစ်ပတ်လုံး ၃ လကြိုတင်အကြောင်းကြားစာဖြင့်နှုတ်ထွက်မှုကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ကျောင်းကဇန်န ၀ ါရီလ ၃၀ ရက်အပြီးတွင်နုတ်ထွက်မှုများအားလုံးကိုပယ်ချမယ်လို့ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျနော့်မေးခွန်းကဒါလုပ်ဖို့သူတို့တရားဝင်လား။ အထူးသဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျောင်းများစတင်စုဆောင်းချိန် မှစ၍ ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ 4, 2015 မှာ 6: 59 နံနက်
အဘူဒါဘီတွင်စီးပွားရေးပိတ်ပစ်ရန်အတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တိကျသောရှေ့နေများရေးဆွဲရန်ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်သည်။ ဒီဟာကိုသင်ကူညီနိုင်မလား?
ဇန်နဝါရီလ 8, 2015 မှာ 8: 50 နံနက်
ကျွန်ုပ်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ FAMILY BUSINESS GOVERMENT မှဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ GM ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတဲ့ LLC ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်အိန္ဒိယအလုပ်သမားအင်အား ၁၀၀ စုဆောင်းမှုအတွက်စီးပွားရေးစာရွက်စာတမ်းများထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်အငြင်းပွားမှုများကိုတင်ပြလိုပါသည်။ ကျနော်တို့ 100AED န်းကျင် 20000AED ခန့်, သူတို့ကသူတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အက္ခရာများထုတ်ပေးလူတွေကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစီစဉ်ဘို့ယခုသုံးဖြုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Reputaion, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဘဏ္lossာရေးဆုံးရှုံးမှုမှအတိတ်ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်နှောင့်နှေး
၎င်းတို့ကိုမည်သို့တရား ၀ င်တင်သွင်းနိုင်မည်နည်း၊
ဧပြီလ 18, 2015 မှာ 9: 19 နံနက်
ဇန်နဝါရီလ 13, 2015 မှာ 5: 34 နံနက်
ကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး ချင်းစီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပေါ်အာဏာအရှိဆုံးပေးတဲ့အကောင်းဆုံးတရားဝင်နည်းလမ်းကဘာလဲ။
သေဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်မေ့မြောခြင်း၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းများကိုရောင်းလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဒူဘိုင်းသို့ရောက်ရှိပြီးအရာရာတိုင်းကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး လုံးဒူဘိုင်းသို့လာရန်မလိုအပ်ပါ။
ဤပြaboutနာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ပေးရန်သင့်ကုမ္ပဏီမှရှေ့နေတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံနိုင်ပါသလား။
ဇန်နဝါရီလ 22, 2015 မှာ 12: 22 ညနေ
ငါကွာရှင်းခြင်းနှင့်အတူအကူအညီလိုတယ်, အထူးသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲဝေခြင်းနှင့်အတူတူပင်နှင့်ပတ်သက်။ စည်းမျဉ်းများ။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2015 မှာ 9: 31 နံနက်
ချစ်ခင်ရပါသော, Sir / Madam,
Salamvalekum ကကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်ပါရစေကျွန်ုပ်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ Andhrapradesh ဘားကောင်စီကိုထောက်ခံသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်၏အစ်မဖြစ်သူ Oman Sohar တွင်ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ခြင်းအားတရားဝင်အမွေခံများကအိန္ဒိယမှလျော်ကြေးပေးရန်မည်သို့တောင်းဆိုသည်ကိုကြင်နာစွာအသိပေးပါရန်။ သက်ဆိုင်ရာနှင့်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည်စသည်တို့၊ အသေးစားကလေးနှစ်ယောက်ရှိသောကျွန်ုပ်၏အစ်မအားလျော်ကြေးပေးရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပေးပါ။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်အားလမ်းညွှန်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သင်ဆရာ / ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဧပြီလ 18, 2015 မှာ 9: 18 နံနက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2015 မှာ 1: 52 ညနေ
ကျွန်ုပ်တွင်ဘောလုံးကလပ်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းရှိသည်။ ကောင်းပြီ၊ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီကကျွန်ုပ်သည်ဒူဘိုင်းရှိဘောလုံးကလပ်တွင်အလုပ်လုပ်နေပြီးကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝပေးဆပ်ခြင်းမခံရသဖြင့်ကလပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စာချုပ်ကိုမလေးစားပါ။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်အရကျွန်ုပ်တို့သည်ဘောနပ်စ်ငွေကို (အနိုင်ရသို့မဟုတ်သရေကျခြင်း) အတွက်ရရှိမည်။ ငါကလပ်မှထွက်ခွာသောအခါသူတို့သည်ပေးဆပ်မှုမပြုခဲ့ဘဲကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်များမှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေရန်ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုမှုကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2015 မှာ 8: 47 နံနက်
သင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင်အပြီးသတ်ပြန်လည်ထူထောင်မှု၏သဘောတူထားသည့်ရာခိုင်နှုန်းကိုရယူသည့်နေရာတွင်အရေးပေါ်အခြေအနေကိုလုပ်ဆောင်ပါမလား။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ဒူဘိုင်းမှာယူနစ် ၂ ခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တယ်။ အရင်တည်ဆောက်သူကကျွန်တော်တို့ကိုမချန်မထားဘဲရာနဲ့ချီတဲ့။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကသင်ကြားသိရသည့်အတိုင်းပြန်လည်ဖျက်သိမ်းလိုက်သောစီမံကိန်းများအားလုံးကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသောကော်မတီအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုအရာသည်ဤစီမံကိန်းကြောင့်ခံစားခဲ့ရသောမူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားတာဝန်ခံသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသတင်းမီဒီယာများနှင့်သတင်းများအားလုံးပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Q developer အသစ်နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစိမ်းရောင်မြင်ကွင်း ၂ နှင့် ၃ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် dirhams ၅၅၁၀၀၀ ကျော်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဘဏ်ရှင်းတမ်းအားလုံးရှိသည်။ ငါတို့ရဲ့ရန်ပုံငွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်မလားသင်တွေးမိသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ developer နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပေမယ့်သူတို့အခြေချရန်နည်းလမ်းများသည်ဤနှစ်များကိုစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ထိုက်တန်သည့်ထင်မြင်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ သငျသညျကြင်နာစွာငါ့ကိုပြန်ပို့နိုင်လျှင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုအပေါ်ထပ်မံပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကြင်နာစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မတ်လ 6, 2015 မှာ 4: 26 ညနေ
(ဤသတင်းစကားသည်သင်၏ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်ရန်ကတိက ၀ တ်မဟုတ်ပါ၊ သင်၏စာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စာပြန်ခြင်းအတွက်အခကြေးငွေမယူရ။ ကျွန်ုပ်ထံမှဆက်သွယ်မှုကိုစာဖြင့်အတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်စွဲချက်နှင့်အခကြေးငွေကိုမကောက်ခံပါ။ )
မင်္ဂလာပါ။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ရက်မှာကျွန်တော့်ဆိုင်ကယ်က Emirati ကားမောင်းသူနောက်ကွယ်ကဒဏ်ရာရသွားပြီးလက်ကိုဖြတ်တောက်ထားတဲ့လက်ချောင်းနဲ့ခြေထောက်ကျိုးနေတဲ့ဆေးရုံကိုခေါ်သွားတယ်။ ယာဉ်မောင်းသည် RAK ရဲတပ်ဖွဲ့တွင်အဓိကဖြစ်သည်။ သူသည်အမြန်ဆုံးချိုးဖောက်မှု ၁၄ ခုရှိသည်။ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားချိန်တွင်သူ၏ကားမှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ ပထမအကြိမ်ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းကယာဉ်မောင်းသည်အပြစ်ရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်မတ်လ ၁၂ ရက်၊ 13 တွင် Mulla Plaza ၌တရားရုံး၌အမှုရှိသည်။
ဒူဘိုင်းတွင်ဤမောင်းသူအားလျော်ကြေးပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တွင်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များ၊ ပျက်စီးသွားသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်အ ၀ တ်အစား ၆၀၀၀ / အစားထိုးခြင်း၊ ၀ င်ငွေဆုံးရှုံးခြင်း၊
ဧပြီလ 18, 2015 မှာ 9: 17 နံနက်
မတ်လ 6, 2015 မှာ 8: 58 ညနေ
ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသို့မဟုတ်အမိန့်ကြောင့်ပြည်နှင်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည်။ ကိုယ့် uae လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးငါ့ကိုတားမြစ်ထား check လုပ်ထားပါပြီ ဒီတားမြစ်ချက်ကိုဖယ်ရှားပေးဖို့မင်းကိုကူညီနိုင်မလား? ငါဒူဘိုင်းကိုပြန်လာနိုင်ပါ့မလား။ ကျွန်ုပ်မှာရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအမှုမရှိပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ gf ကိုဒူဘိုင်းရှိသူမ၏အိမ်သို့သွားပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအဆောက်အအုံကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုသောအခါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပို့ခဲ့သည်။ gf ကိစ္စအတွက်လား ????? မင်းလမ်းပြပေးနိုင်မလား
ဧပြီလ 19, 2015 မှာ 7: 42 နံနက်
တက္ကစီနောက်ကွယ်တွင်ကားပျက်သွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဘယ်ဘက်လည်ပင်း whiplash (၂၀၁၅ Aprilပြီ ၁၅၊ တက္ကစီနောက်ကွယ်မှပျက်ကျသဖြင့်) (ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အခြားသူငယ်ချင်းကထိုတက္ကစီ၏ခရီးသည်ဖြစ်သည်) ထိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဘယ်ဘက်မျက်လုံးနှင့်ဘယ်ဘက်နားတို့သည်ထိခိုက်မှုရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ ကျွန်ုပ်တက္ကစီနှင့် Ford Escape ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးသည်အငှားယာဉ်နောက်ကွယ်မှပျက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သာဓကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ whiplash သည်နူးညံ့ရုံမျှသာဖြစ်သည်။
မေလ 3, 2015 မှာ 3: 45 ညနေ
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ စာရွက်စာတမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံဖုန်းခေါ် ဆို၍ ၀ င်ပါရန်တောင်းဆိုသည်။ 050 6531334
မေလ 3, 2015 မှာ 10: 56 နံနက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေါ်လာဘီလျံ ၃၀၀ ဖိုးယူရန်ဒူဘိုင်းရှိ Delite Trailers LLC အမည်ဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ကန်ထရိုက်စာချုပ်တစ်ခုရှိသည်။ သူတို့ဘဏ်များမှ Mashreq Bank Psc မှတစ်ဆင့်ထုတ်ပေးသည်။
ဘဏ်အနေဖြင့်ငွေပေးငွေယူကိုအတည်ပြုပြီးပြီ ဖြစ်၍ ငွေပမာဏကိုဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀၀၀ ကျော်အကုန်အကျခံ။ ရုတ်တရက်ဆိုရလျှင်ဘဏ်နှင့်ဖောက်သည်သည်တိကျသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲထွက်ခွာသွားကြသည်။
မေလ 3, 2015 မှာ 3: 40 ညနေ
ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်တယ် .. သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကြင်နာစွာတွေ့ဆုံပါ ..
မေလ 4, 2015 မှာ 3: 25 ညနေ
မစ္စတာဟမ်ဖရီ, စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်တော်သူတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအမှုတစ်ခုကိုတင်သွင်းနိုင်ပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာအဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးလိုအပ်သူများကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်